It isavery fine and rare sculpture.
The statue was cast in alloy called Pyinsaloha meaningacompound of five metals namely gold, silver, bronze, lead and tin. The upper lip of the statue’s mouth is thin and long and the lower lip thick and short. The neck is rather broad at the base bearing three lines. The robe is curved in lines. Its fingers are like real human fingers. They are not of the same length, as is usual the case with similar statues.
အလွန်ရှားပါးပြီး လက်ရာမြောက်သော ရုပ်တုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုဂံမြို့ဟောင်း၏တောင်ဘက် ၁၅-မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသော စဉ့်ကူ ကျေးရွာရှိ နဂါးရုံဘုရား၏ ကွမ်းတောင် (ဂူဘုရားထိပ်ပိုင်း) အရှေ့ဘက် မျက်နှာစာမှရရှိသည်။ ယခုအခါ ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ ခဲ၊ သံဖြူ ဟူသော ပစ္စည်းငါးမျိုးဖြင့် ရောစပ်သွန်းလုပ်ထားသောကြောင့် ပဉ္စလောဟာ (သတ္တုငါးမျိုး)ဟု ခေါ် တွင်သည်။ ရုပ်ထု၏အပေါ်နှုတ်ခမ်းတော်သည် ပါးလျရှည်လျားပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းတော်သည် ထူ၍တိုသည်။ လည်ပင်းတော်သည် တုတ်ခိုင်ပြီး လည်ရစ်တော်သုံးဆင့်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်္ကန်းတော် ကို လိုင်းအနေဖြင့် ထွင်းထုထားသည်။ လက်ချောင်းတော်များကို သာမန်လူသားအသွင် အတိုအရှည်မညီစွာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် တစ်ပြေးညီ ပုံစံမျိုး မတွေ့ရပေ။
Gold, Silver, Bronze, Lead, Tin
Width 23 cm. Height 71 cm.
11th Century - 13th Century; Bagan Period
The Buddha image was found at the east face of Sikara (upper part of the temple)of the Nagayon temple at Singu village, 15 miles to the south of Bagan in 1972 and afterwards transferred to the museum.
ပဉ္စလောဟာ (ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ ခဲ၊ သံဖြူ)
Width ၂၃ စင်တီမီတာ Height ၇၁ စင်တီမီတာ Length -
ပုဂံမြို့ဟောင်း၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စဉ့်ကူကျေးရွာရှိ နဂါးရုံဘုရားမှ ၁၉၇၂-ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
Bagan Archaeological MuseumAD 11th century ~ AD 13th century SculptureGold, Silver, Bronze, Lead, TinUnknownBagan Ancient City, Nyaung-U Dristrict, Mandalay Region, Central Lowland